Zimbabwe hikes fuel price again after minister says it's still cheap - Nile Post
Zimbabwe’s energy regulator has raised petrol and diesel prices by up to 16%, the fourth increase this year, after the finance minister said fuel was considerably cheaper than in neighbouring countries.
President Emmerson Mnangagwa announced the biggest fuel price hike in January, a 150% increase, which sparked deadly protests by financially struggling Zimbabweans that left more than a dozen people dead after an army clampdown.
While Ncube wants fuel prices to reflect import costs, many Zimbabweans can barely afford to pay them when the unemployment exceeds 80% and the entry-level wage for a government employee is about $49 a month – enough to buy a car tyre.
Hopes that living standards would soon improve under Mnangagwa, who came to power after Robert Mugabe was removed in a coup in 2017, have not been realised. Instead, Zimbabweans are frustrated by daily power outages lasting up to 17 hours and severe shortages of U.S. dollars, fuel, bread, and medicines. (Reporting by MacDonald Dzirutwe Editing by Mark Heinrich)
Tags: fuelFuel pricesZimbabwezimbabwe fuel prices
Zimbabweans say Ugandan judge can’t preach to them about corruption
Zimbabweans have protested against their Chief Justice’s decision to invite a Ugandan judge to lecture them on how to fight...
Zimbabwe’s Mnangagwa takes three week holiday, VPs take charge